Fitsipi-pitenenana - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Fitsipiteny)
Ny fitsipi-pitenenana na fitsipiteny dia fitambarana fitsipika momba ny fomba tokony hitenenana sy hanoratana ny fiteny iray, ka na amin'ny lafiny endri-teny izany na amin'ny lafiny fandrafetana fehezanteny, eny fa hatramin'ny hevi-teny sy ny feon-teny aza.
Ny dikany dia :
Fandinihana ny fiteny: ny fomba fampiasana azy, ary ny zava-drehetra mahakasika izany.
Fandihinana ny firafitry ny fehezanteny. Ny vondrom-pitsipika ary ohatra mifehy ny fampiasana ny fiteny. Fitsipi-pitenenana marina no iantsoana izany, tahaka ny ao amin’ny bokin-tsoratra na boky fianarana.
Ny rafitra ianaran’ny vahoaka rehefa mitombo.
Rehefa miteny isika, dia ny fitsipi-pitenenan’ny olona nobeazina tamin’ilay fiteny no ampiasaina. Rehefa manoratra, ny tanjona dia ny fampiasana fitsipi-pitenenana marina. Ny teny soratana sy ny teny tenenina dia samy manana ny endriny.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fitsipi-pitenenana&oldid=969808"
Dernière modification le 4 Aprily 2019, à 13:01
Voaova farany tamin'ny 4 Aprily 2019 amin'ny 13:01 ity pejy ity.